Seenaa irraa barachuun barbaachisaadha (1918 Spanish flu pandemic, the case of Abyssinia) – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooSeenaa irraa barachuun barbaachisaadha (1918 Spanish flu pandemic, the case of Abyssinia)
Etana Habte irraa, Bitootessa 22, 2020
1918 Digging mass graves for victims of the Spanish flu. genealogygals.com
Raafamni ‘Coronavirus’ (dhukkuba ‘COVID-19) addunyaatti fide ilaalchisee addatti maaliif akka waa’een biyya keenyaa nuyaaddessu ilaalchisee waa’ee ‘Spanish Flu’ ykn ‘Influenza Pandemic’ bara 1918 biyya keenya rukutee darbe kaaseen ture. ‘Spanish Flu’ ykn ‘Influenza Pandemic’ akkuma maqaan isaa agarsiisu kan inni rukute biyya keenya qofaa miti; guutummaa addunyaa rukute. Dhukkubni kun wayita ka’u Waraanni Addunyaa Inni Jalqabaa xumuramaa ture. Dhukkubni kun guutummaa addunyaatti namoota miliyoona 500 qabee ture, isaan kana keessaa miliyoona 50 ajjeeseera.
Dhukkubni ‘Spanish Flu’ kun akkuma biyyoota biroo biyya keenya keessattis marsaa lamaan mul’atee ture. Marsaan inni duraa Arfaasaa fi Ganna (spring and summer) kan mul’ate wayita ta’u inni lammataa Birraa (Autumn) keessa mul’ate. Mallattoolee ‘Spanish Flu’ keessaa muraasni dhaqna gubaa, mataa dhukkubbii, dhukkuba qoonqoo keessaa (sore throat), qufaa, dhukkubbii dugdaa fa’i. ‘COVID-19’ ammaa kana waliin baay’ee walfakkaata. ‘Spanish Flu’n kan rukute guutummaa biyyattii ta’us kan hedduu miidhame Magaalaa Finfinneeti. Lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan Finfinnee keessatti du’an ilaalchisee maddoonni jiran tokkummaa qabaachuu baatanis namoonni 10,000 (kuma kudhan) magaala guddittii biyyattii keessatti dhukkuba kanaan dhumuu baay’een isaanii irratti waliif galu. Baay’inni uummata magaalattii bara sana 50,000tti tilmaamama ture. Bakkeewwan biroon dhukkuba kanaan hedduu hubaman keessaa isaan hamma ammaatti beekaman Tigraay, Somaalee (Ogaaden), godinaalee lixa Oromiyaa fa’i. Uummata Finfinneen alatti dhukkubni ‘Spanish Flu’ fixe kana tilmaamuuf maddoonni ga’aan hinjirani.
Aangawoonni mootummaa gurguddoon dhukkuba kanaan qabamanii sireetti galan. Mataa mootummaa barasii kan ture Tafarii Mokonnon (booda Haaylasillaasee) dhukkubsatee erga qarqara du’aa ga’ee wal’aansa hakiimota biyya alaatiin lubbuun deebite. Mootittiin Zawudituu Minilik karra masaraa cufattee nama ofirraa kuttee teesse. Fit. Habtagiyoorgis Diinagdee baay’ee miidhamee fayye. Phaaphaasiin Mana Sagadaa Ortodoksii barasii Abuuna Maatiwoos baqatee daggala Mannaagashaa keessatti dhaqee mana tolfate. Kantiibaan magaalattii Wasanee Zamanu’eel fakkeenya Phaaphaasichaa hordofuudhaan baqatee erga ba’ee booda qabamee deebifame. Aangawoonni mootummaa hedduun garuu baqatanii badanii turani. Poolisoonni hedduun dhukkubichaan waan dhumaniif magaalattiin humna nageenyaa malee hafte. Manneen daldalaa fi suuqonni saamamuun waan nama ajaayibu hinturre. Abbaan barbaade nama barbaade ajjeesa. Manneen murtii hojii dhiisanii cufaman. Gabaabumatti mootummaan ni diigame. Bara sana Faarmaasiin tokko qofaa ture. Hakiimonni hedduun dursanii dhukkuba kanaan dhuman. Namoonni hedduun Araqee akka qorichaatti fayyadamaa turan; lammiileen biyya alaa Finfinnee keessa jiraataa turan ammoo Wayinii dhugu ture. Dhugaatiin kun lamaan daawaa ta’ee tajaajiluuf humna qabaachuu fi dhiisuu namni qoratee bira ga’e hinjiru. Tajaajilli yaalaa fi babal’inni mana qorichaa har’a jiru isa bara 1918 ture irra baay’ee fooyya’eera jennee yaaduu dandeenya ta’a; dhukkubni ‘COVID-19’ kun garuu akkuma ‘Spanish Flu’ barasii dhukkuba daddarbaa haaraa qorichi/daawaan hinargaminiif jiru waan ta’eef yaaddoo addunyaa ta’ee jira. As irraa kaanee rakkoo dhukkubni kun biyya keenyatti fiduu danda’u tilmaamuu dandeenya. Kanaaf adaraa of eegaa jennee gadoodnee iyyina. Of eeganii Waaqayyoon na eegi jedhu.
“The Horn of Africa received it [spanish flu] in November, and Haile Selassie I, then regent of Abyssinia, reported that it killed 10,000 in the capital, Addis Ababa.” Laura Sinney writes in her book, Pale Rider: The Spanish Flu of 1918 and How It Changed the World, 2017
Balaan ‘Spanish Flu’ Finfinnee keessatti qaqqabsiise garuu baay’ee suukanneessaadha. Baay’ina namoota du’anii irraan kan ka’e reeffa namaa karaa cinaa utuu ciisuu namoonni ilaalaa bira darbu ture. Namoonni fira hinqabne mana akka cufatanitti du’anii achumatti tottorani. Sareen foon namaa soorratte, Waraabessis mucaa namaa irbaata taasifate. Bakki awwaalaa dhiphachuu irraan kanka’e namoonni bakka maatiin isaanii itti awwaalaman filachuu hindanda’an ture. Bakka awwaalaa filachuun hafnaan namni warra du’aa adeemee reeffa kafanee irraa awwaalu ni dhabame. Keessumatti dubartoonni abbaan warraa irraa du’e nama reeffa fuudhee isaaniif awwaalu barbaacha baay’ee dhama’u ture. Abaluukootu najalaa du’e jedhanii gadda/taazziyaa taa’uun ni hafe; taazziyaa mitii boo’aanii awwaallachuunuu ni hafe. Safuun ni cabe, hawaasni ni manca’e. Duuti inni hamaan baatii Sadaasaa (Hidaar) keessa waan tureef uummatni Finfinnee dhukkuba kana የህዳር በሽታ jedhee waama ture. Waaqayyo biyya keenya salphina akkasii irraa ha eegu!
Maaloo Seenaa irraa Haa Barannu! Damee Boruu tin - Bitootessa 10, 2018 Hooggantoonni OPDO bara…
Odu Gammachiisaa! SHINNIGA MEDIAAN yeroo dhihoo keessatti haala Oromiyaan keessa jirtuu fi Addunyaa keessa jirtu…